TAPATAPAK'AHITRA NIARAHAN'NY PÔETAWEBS TAMIN'I NARILALA
Pôeta tanora iray no miantrano ato anefitry ny Tapatapak'ahitry ny tranonkala Pôetawebs. Narilala no anarany, mpiantsa tononkalo koa izy ary tsy vao ela akory izay no niakarany an-tsehatra niaraka tamin'ny fikambanana misy azy: MPIZAKA STELARIM.
Mivimbina voandalana ho antsika izy anio. Toetra Ràja no mitafatafa aminy.
Miarahaba anao Narilala. Sitraka sy telina izao fivahinianao aty aminay izao. Makà toerana tsara ato an'efitry PÔETAWEBS.
Miarahaba anao Toetra Ràja ary misaotra anao amin'izao fanasana izao. Mamelà ahy ianao ilazako fa anisan'ny mampivelatra ny habaky ny literatiora ny fisian'ny vondron-tserasera "POETAWEBS" izay manome vahana ny zava-kanto, indrindra ny sehatry ny Haisoratra.
Misaotra indrindra. Mety ho mbola misy no tsy mahafantatra an'i Narilala?
- RAVAKINORO NARILALA LUDOVIC no anarana ao amin'ny sora-piankohonana, Mpianatra sampana MALAGASY nandalina ny LITERATIORA teny Ankatso.
NARILALA no iantsoana ahy eo amin'ny sehatry ny haisoratra, mpikambana ao amin'ny MPIZAKA STELARIM eny Ankatso.
Izaho dia anisan'ny mpandray anjara amin'ilay hetsika TRANOVORONA izay hatao ny ZOMA 30 Oktobra 2015 ao amin'ny IVOKOLO CEMDLAC ANALAKELY amin'ny 3 ora folakandro.
Momba izay indrindra, inona ny zava-ponosin'izany anarana mampihetsi-po izany?
Nosafidianay manokana ny lohateny hoe "TRANOVORONA" satria:
- ny Tranovorona dia fitaovana iray hitondrana faty ho ao am-pasana, rehefa avy nanaovana fombafomba isankarazany ny faty. Amin'ny Malagasy dia ny faty tafiditra ao am-pasana ihany no antsoina hoe RAZANA. Ary ny finoana malagasy dia mametraka ny razana ho MANANKASINA sy afa-mitahy sy manasoa ny mpiara-belona. "Raha razana tsy hitahy, mifohaza hiady vomanga" hoy ny ohabolan-dRazantsika.
Hisy fombafomba haseho izany amin'io?
Tarafina amin'io ny hetsika izay hataonay, ny fitaovana entinay hanomezan-kasina ny Tanindrazantsika, dia ny POEZIA.
Mila mifoha hasina mantsy ity nosy mamintsika ity raha te hifampitaha amin'izao tontolo izao. Maro ny zavatra heverintsika ho tsinontsinona kanefa amin'ireny no singa mety hahafahana mandroso.
Tsy lavitry ny fetin'ny maty io daty io.
Ao anatin'ny fankalazana na fahatsiarovana ny maty rehetra isika ny 2 novambra 2015, noho ny fandaminana dia natao 30 oktobra ny hetsika TRANOVORONA. Amin'ny 3 ora hariva satria manomboka eo ny fanitrihana ny faty ho ao am-pasana ary rehefa tsara levenana izy dia manana ny HASINA ary ny tranovorona tsy ho entinay mody fa hatao eo ivelany mba hahafahantsika manjifa azy...
Manko, hisy BOKY TRANOVORONA azonao jifaina amin'io fotoana io.
Mazava! Ary ny momba ireo mpiantsehatra?
Miisa 7 izahay no mpandray anjara amin'io hetsika TRANOVORONA io. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa mpanoratra efa zatra niaraka ihany izahay satria na dia samy any anaty fikambanany avy any aza dia efa nisy hetsika niraisana. Tsy inona izany fa ny "TANY GIAZANA".
Tsy ireo mpanakanton'ny "TANY GIAZANA" rehetra angamba?
Ny masontsivana angamba tsy dia misy loatra fa ny fifampitakosenana taminay no nanome AFO niredaredan'ny fitiavan-tanindrazana tao anatinay.
Ireto avy ireo handray anjara ao:
- RARY MAMPIONONA
- IKALOYNA VONY.
Aiza ho aiza ny fanomanana ankehitriny?
Ny fanomanana dia efa mipetrapetraka daholo fa ny fotoana sisa andrasana ô!
Misy mpanohana ve ianareo?
Ny manohana anay amin'ity hetsika ity hatreto dia ny IVOKOLO CEMDLAC ANALAKELY ihany.
Hianoka antsa tononkalo ranoray izany izahay!
Eny, kanefa na dia izany aza dia ao ihany koa ny zokibe HEMERSON hanampy anay eo amin'ny feon-kira lafika sy ny pitsopitsony samihafa ô.
Zoma io andro io, tsy mbola fialan-tsasatra!
Tsy mifanandrify amin'ny andro fialan-tsasatra hatrany akory ny filanjana TRANOVORONA.
Manentana izahay fa asakasak'izay tsy ho avy e!
Adidy masina no tanterahanay... "Zanahary tapany" anefa ny mpanoratra raha tsy misy anareo mpijery.
Adin'ny roa eo ho eo ny fampisehoana amin'io ZOMA faran'ny volana Oktobra io.
Hahaliana tokoa ny endrik'izany TRANOVORONA an-tsehatra izany!
Ao isika mahita azy fa "ny poezia hanangana ny maty" hoy i RANDJA ZANAMIHOATRA.
- ny maty ara-kolontsaina
- ny maty ara-pitiavana.
Vazivazy tena izy ihany izany fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe: MILA MAMOHA NY HASINA MAHA ISIKA ANTSIKA ISIKA.
Hafatra sarobidy izany!
Aza hadinoina ny fotoana ny ZOMA 30 OKTOBRA 2015 amin'ny 3 ora hariva ao amin'ny IVOKOLO CEMDLAC ANALAKELY.
Dia misaotra ny POETAWEBS nampandroso sy nanome toerana tato avarapatana ô!
Ianao Narilala no isaoranay nahafoy fotoana sy nanome ny antsipirihany momba ny TRANOVORONA. Mirary fahombiazana tanteraka. Ho ela velona anie ny Pôeta sy ny pôezia malagasy. Veloma mandra-pihaona!
Date de dernière mise à jour : 17/10/2015